यौनसम्बन्धी हरेक जोडीले जान्नै पर्ने यस्ता छन् ६ कुराहरु – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यौनसम्बन्धी हरेक जोडीले जान्नै पर्ने यस्ता छन् ६ कुराहरु
चरमानन्दको अनुभूत गर्ने माध्याम हो, यौन । अर्थात आनन्दको पनि उत्कर्षमा पुग्ने बाटो हो, यौन । यो आफैमा सुखद अनुभव हो ।
यौनको प्रसंगमा हामी लजाउने गर्छौं । यौनलाई छाडा भन्छौं । जबकी यो प्राकृतिक कुरा हो । र, सृष्टिलाई चलायमान राख्नका लागि यौनको भूमिका अपरिहार्य छ ।
यौनमा चरम सन्तुष्ट छ । यो दाम्पत्य सुखको एक तत्व हो । दम्पतीबीचको सम्बन्ध सुमधुर राख्नका लागि यौनले भूमिका खेल्छ । के पनि भनिन्छ भने, सक्रिय यौन जीवनले दम्पतीको सम्बन्धमा मात्र निकटता ल्याउने होइन, स्वास्थ्य लाभ पनि मिल्छ ।
तर, यौनको पनि आफ्नै मान्यता छ । परिधि छ । नियम छ । यौन सम्पर्क कहिले गर्ने, कुन समयमा गर्ने, कहाँ गर्ने, कुन स्थितीमा गर्ने भन्ने कुरा तय गरिएको छ । यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर यौन क्रिया गर्दा चरम आनन्द प्राप्त हुन्छ भनिन्छ । साथै स्वास्थ्यलाई पनि लाभ मिल्छ ।
यौन हरेक व्यक्तिको आवश्यक्ता हो र सुखद अनुभूति पनि । त्यसैले यौन सम्पर्क राम्रो भावनाले गर्नु जरुरी छ । आनन्ददायक यौन सम्पर्कका लागि पार्टनरसँग समर्पणका साथसाथै सहयोग र सहमति पनि जरुरी छ । यदि पार्टनरलाई यौनमा रुची छैन भने जबरजस्ती गर्नु गलत हो ।
अतः यहाँ यौन सम्पर्कलाई लिएर दम्पतीबीच उठ्ने प्रश्नको उत्तर खोजिएको छ ।
कुन परिस्थितीमा यौन सम्पर्क गर्नबाट बच्नुपर्छ, किन ?
धेरैजसो दम्पती यस सम्बन्धमा त्यती जानकार हुँदैनन् । कहिले यौन सम्पर्क राख्ने र कहिले नराख्ने ? यस्ता कुरामा बेखबर रहेर यौन सम्पर्क गर्दा त्यसबाट जुन आनन्द पाउनुपर्ने हो, त्यो पाइदैन । साथै त्यसको असर स्वास्थ्यमा पनि पर्छ । त्यसैले संभव भएसम्म शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थ्य भएको बेला यौन सम्पर्क राख्नु उचित मानिदैन ।
शारीरिक समस्या, खासगरी मुटुको समस्यामा यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन ?
शारीरिक तथा मानसिक अवस्था राम्रो नभएको बेला यौन सम्पर्क गर्नु बेकार हुन्छ । मुटुको समस्या झेलिरहेको अवस्थामा आरमको जरुरी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यौन क्रियाले मुटुमा समस्या ल्याउन सक्छ ।
मानसिक अस्वस्थ्यताको बेला किन यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन ?
यौन सम्पर्क शारीरिक क्रिया हो । तर, यसमा मानसिक उपस्थिती पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । मानसिक तनावको अवस्थामा वा कुनै मानसिक समस्या छ भने त्यस्तो बेला यौन सम्पर्कबाट आनन्द लिन सकिदैन । डिप्रेसन, तनाव जस्ता कुनैपनि समस्यामा यौनको रुची नै जाग्दैन । जब यौनमा रुची छैन भने जबरजस्ती यौन क्रिया गर्नुको अर्थ हुँदैन ।
कहिले काहिँ इन्टरकोर्सको समयमा पार्टनरलाई दुख अनुभव भएमा सेक्स गर्नुहुन्छ ?
जब इन्टरकोर्सको समय पार्टनरलाई दुखाई अनुभव हुन्छ भने, सम्झनुहोस् त्यो खतराको घण्टी हो । यस्तोमा यौन सम्पर्क गर्नु खतरालाई निम्त्याउनु हो । त्यसैले इन्टरकोर्सको समयमा पार्टनरलाई खासगरी पत्नीलाई कुनै दुख, पीडा भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चिकित्सककहाँ जानुपर्छ ।
बिहे भएको ४ बर्ष भयो बच्चा भएन के गर्दा बच्चा हुन्छ होला यो नम्बरमा फोन गरि बताइदिनुहोला।
कार्दसियन शैलीमा जानभी कपुर, सिल्भर स्विम सुटको फोटो भाइरल
खुद्रा पसलदेखि सुपरमार्केटसम्म चकलेटको व्यापार, हुँदैन खुद्रा पैसा फिर्ता
एप्पलले तीन महिनामा बेच्यो १ खर्ब ११ अर्ब अमेरिकी डलरको उत्पादन
आज उषा खड्गीको जन्म दिन हो , हामी सबै मिलेर जन्मदिनको शुभकामना दियौ !